“Ma awoodno inaan bixino 300 milyan xilli ciyaareed kasta sida Manchester City” – Jurgen Klopp – Gool FM
“Ma awoodno inaan bixino 300 milyan xilli ciyaareed kasta sida Manchester City” – Jurgen Klopp
(England) 18 Luulyo 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Reds aysan si xoogan u gali doonin suuqan kala iibsiga ee xagaaga, marka loo fiiriyo sida ay kasoo sameysay labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Isagoo sheegay in awoodda wax iibsiga ee kooxda Reds aysan la mid aheyn sida Manchester City iyo Paris St Germain.
Liverpool ayaan wali suuqan xagaaga ka sameynin wax saxiix ah, marka laga reebo daafaca da’ayarka ah ee reer Holand Sepp van den Berg, taasoo keentay in taageerayaasha Reds ay maamulka ka codsadaan in la sameeyo qandaraasyo badan ay xili ciyaareedka cusub ugu tartami karaan horyaalka Premier League iyo Champions League.
Xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda Liverpool ayaa sameeyay saxiixyo muhiim oo ay ka mid ahaayeen goolhaayaha reer Brazil ee Alisson Becker, Fabinho iyo Naby Keïta, laakiin xagaagan kooxda wali ma aysan sameynin heshiisyo waaweyn.
Hadaba Jurgen Klopp ayaa wareysi uu ku bixiyay Web site-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu ku sheegay:
“Qorshaha xagaaga ee kooxda Liverpool? Waxaan dareemeynaa raaxo, waan arki doonaa waxa dhaca”.
“Sida aan horay u sheegay, Liverpool ma sameyn doonto suuqa kala iibsiga xagaaga ee xoogan, waxaan lacago badan ku iibsanay kooxdii labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, waxaan rabaa inaan sheego in lacagahaasoo kale aanu bixin karin sanad waliba”.
“Taageerayaasha waxay ka hadlayaan in markale xagaagan la bixiyo ​​200 ama 300 milyan oo dheeraad ah, waxaana laga yaabaa inay jiraan laba kooxood oo taasi samayn kara, waana Real Madrid iyo Barcelona, ​​iyo sidoo kale Manchester City iyo Paris Saint-Germain”.
“Si walba oo ay ahaato, waan ku faraxsanahay kooxda, waxaa laga yaabaa inaan sameyno heshiis kale ee ah booska aan u baahanahay inaan xoojino, laakiin ma jiro cadaadis dhab ah ee inagu qasbi kara inaan sameyno saxiixa ciyaaryahan, sababtoo ah waxaan isku xalin karnaa siyaabo badan”.